ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကားစာရင်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello အလုပ်အကိုင်အရငျးအမွစျ | USAHello
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကားစာရင်းတစ်ခုသင့်ရဲ့အတိတ်အလုပ်ရှင်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်. တစ်ဦးအလုပ်ရှင်သင်သည်ငှားရမ်းလိုပါက, သူတို့ဤလူကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကသင်ဝန်ထမ်းဘယ်လိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကားစာရင်းတစ်ခုပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာပါ.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကားစာရင်းတစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးအနီးအဘို့ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဟောင်းတဦးအလုပ်ရှင်များများစာရင်းကိုဖြစ်ပါသည်, မန်နေဂျာများ, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်. Professional ကညွှန်းဆိုရိုးရိုးသားသားသင်၏အလုပ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြရန်နိုင်သူလူဖြစ်ရမည်အကြောင်း.
တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကိုးကားဘို့သင့်ကိုမေးတယ်ဆိုပါက, ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ငှားရမ်းထားတဲ့ကောင်းတစ်ခုအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုလိုတယ်. အလုပ်ရှင်သင့်အကြောင်းမေးခွန်းများမေးရန်သင့်ညွှန်းဆိုမခေါ်ပါလိမ့်မယ်. သူသို့မဟုတ်သူမကသင်နှင့်သင်ကလုပ်ခဲ့တယ်အလုပ်အမျိုးအစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တူသောဘာကသူတို့ကိုမမေးပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကလူတစ်ဦးကိုထပ်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်သင့်ရဲ့အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုမေးစေခြင်းငှါ.
သင်နှင့်အတူတလျှောက်တယ်လူကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင့်အကြောင်းကြင်နာသောအရာတို့ကိုပြောပါလိမ့်မယ်. သင်လုပ်နိုင်လျှင်, မန်နေဂျာများနှင့်မယ့်လုပ်ဖော်ဆက်သွယ်ပိုကောင်းက. သင်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီလူတွေကိုစာရင်းပြုစုဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအချိန်ပြည့်အလုပ်ကနေကိုးကားရှိပါကဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျစေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်သို့မဟုတ်အခြိနျပိုငျးအလုပျပွုပါပွီဆိုပါက, သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ, လူများလွန်းကိုးကားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျဖို့ရှိသည်မဟုတ်လျှင်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုစာရင်းပြုစုမနေပါနဲ့.
သင် USA တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးဘူးဆိုပါက, ဒါကြောင့်အခြားတိုင်းပြည်ကနေကိုးကားစာရင်းပြုစုဖို့အားလုံးကိုမှန်သည်. ဤအမှုကိစ္စများတွင်, သငျသညျလူတစျဦးစကားပြောဆိုရန်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယျအခြိနျရေးချနိုင်. (ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ခြားနားချက်များအရေးကြီးပါသည်။) သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါလျှင်သင်တို့သည်လည်းပြောနိုင်. ဤသည်အလုပ်ရှင်နှင့်သင့်ကိုကိုးကားနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်.
ပဌမ, သင့်ရဲ့ဟောင်းတဦးအလုပ်ရှင်များဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပဌနာနှင့်သင်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေကြသည်သူတို့ကိုပြောပြ. ရန်သေချာစေပါ နည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာရည်ညွှန်းတောင်းဆိုရန်. သင်သည်သူတို့၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို share မယ်ဆိုရင်အားလုံးမှန်သည်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. သူတို့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်၏မကြားကြလျှင်, သူတို့ကိုကရှင်းပြ. သင်တို့သည်ဤမျှသူတို့သည်သင့်အကြောင်းကိုပြောအရာကိုသိဘို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းအလုပ်အမျိုးအစားသူတို့ကိုပြောပြပါ. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးဘဏ် Teller အဖြစ်အလုပ်အဘို့အတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းလျှင်, သူတို့သည်သင့်ကောင်းသောသင်္ချာနဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဟုပြောသင့်တယ်.
နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကလူသဘောတူညီခဲ့ကြသည့်အခါ, သင်သည်သူတို့၏အမည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ၏စာရင်းကိုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ. အဖြစ်မကြာမီသငျသညျအလုပျတရှာဖွေနေစတင်နိုင်အဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကားစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်စမတ်က.
သင့်ရဲ့စာရင်းကိုတွင်, တစ်ခုချင်းစီကိုရည်ညွှန်း၏အမည်ကိုပါဝင်သည်, ခေါင်းစဥ်, ဖုန်းနံပါတ်, အီးမေးလ်က, ကုမ္ပဏီနှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု.. အလုပ်ခွင်အပြည့်အဝလိပ်စာရေးပါ. လည်း, သင်နှင့်သင့်ကိုကိုးကားကြားဆက်ဆံရေးဖော်ပြဥပမာ -, သငျသညျတူညီသောအနေအထားရှိကြ၏သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင်၏သူဌေးခဲ့ကြသည်?
အရာအားလုံးအကောင်းကြည့်ဒီတော့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကဲ့သို့တူညီသောစတိုင်နဲ့ font ကိုအသုံးပြုသေချာအောင်လုပ်ပါ. It is easy to do this if you useatemplate. သင်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်ညွှန်းစာရင်းများအတွက် template ကို.
Professional ကရည်ညွှန်းစာရင်း template ကို